Gadiid Tayo Weyn oo Qiimaha Shaati | Martech Zone
Gadiid Tayo Weyn oo Qiimo Shaati ah
Sabtida, Juun 14, 2008 Jimco, Febraayo 12, 2016 Douglas Karr
Haddii aadan ka dhicin guud ahaan barta Jeremy Shoemoney, waa bog weyn oo la raaco. Jeremy sidoo kale wuxuu leeyahay barnaamij weyn oo la yiraahdo Shirt Bilaash ah.
Waxay qaadan kartaa dhowr bilood Jeremy inuu xirto funaanadaada, waa barnaamij caan ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan xoogaa la hadlo kan saamaynta ee kaqeybqaadashada barnaamij sidan ah. Waa wax iska cad in barta Jeremy aysan shaqo ku lahayn Veterans Navy; si kastaba ha noqotee, gaaritaanka boggiisa in ka badan wuxuu ka sameeyaa suuqgeynta Af-ka-Afka.
Dhowrkii bilood ee ugu horreeyay, waxaan ka iibsanayay Xayeysiinta Lacag-Guji-Guji, ee Google Adwords, si aan ugu dhiirrigeliyo NavyVets.com. Xisaabinta tirada isticmaaleyaasha diiwaangashan iyo wadarta qadarka xayeysiinta ee aan qarashgareynayay, waxaan bixinayay waxyar oo ka badan $ 8 qofkiiba isticmaale diiwaangashan (aka: beddelaad) Taasi way qaali noqon kartaa, dhaqso badan. Hadda maaddaama ay boggu xoogaa xoogaa ah yareeyeen, waan ka gaabiyey iibsiga iidhehyada.
Shabakadaha bulshada aad ayey ugu fiican yihiin suuq geynta naftooda, laakiin waxaad u baahan tahay inaad marka hore dhowr lambar fiican hesho. Iyada oo yar Indiana, barta tilmaamtu waxay ahayd ilaa 1,000 isticmaale. Vets Ciidanka Badda wuxuu hadda joogaa ~ 300 oo isticmaale.
Marka la barbardhigo, iibsashada shaati Jeremy ahaa qiyaastii $ 16 waxaan helnay 8 boos celin oo cusub 24 saac gudahood xilkiisa.
Taasi waa $ 2 halkii beddelaad halkii $ 8, waa keyd aad u badan!
Ma heshay degel aad jeclaan lahayd inuu Jeremy ku dhiirrigeliyo? U soo dir shaati!
Fursadii Ugu Dambeysay Ee Is Diiwaan Gelin: Aqoon Isweydaarsi Maalin Badh Berri ah
Jun 14, 2008 at 8: 11 PM
Waxaan u diray qoraalkan saaxiibkay oo leh shirkad funaanad internet ah …… waxay u noqon kartaa nooc cusub oo taraafikada baabuurta isaga ah?! :) Scott
Oktoobar 3, 2008 at 1:32 AM
Fikrad qabow, Douglas. Ka fikir inay tahay inaan bilaabo wax la mid ah halkan Australia 😉